Faa'iidooyinka Bankiga Swiss, Qarsoodi, Kharashka iyo Dejinta Xisaabta
Baanka Swisska ayaa muddo dheer lala xiriiriyay xirfadle, maskaxeed, ammaan ah oo bangiga. Waa sharci-dejin loogu talagalay dhexdhexaadinta iyo raacitaanka mabaadii'da qarsoodiga bangiga. Shakhsiyaadka badanaaba waxay u leexdaan bankiyada Switzerland laba sababood. Marka hore, dad badan ayaa raadinaya in ay ilaaliyaan hantida muhiimka ah ee baaritaanka dadweynaha. Marka labaad, tiro dad ah ayaa u jeeda Switzerland si ay u yareeyaan culayska canshuurta culus. Labada kooxood waxay si caadi ah u eegi jireen Isku-xidhka Bangiga Swiss sida doorasho aad u soo jiidasho leh.
Adeegyadani wax cusub maahan. Xisaabaadka bangiga Swiss ayaa hogaaminayay bangiga caalamiga ah muddo tobanaan sano ah. Taasina way ku mahadsantahay qayb ka mid ah xasilloonida siyaasadeed iyo muran madani ah oo ku hareeraysan adduunka. Waxay ahaayeen hogaamiyayaal dhaqaale iyo xasillooni ahaan boqolaal sanadood. Xaqiiqdii, dunidu waxa ay tan u aragtay maalmaha Louis XIV. Dheeraad ah, waxay sii waday maalmihii ka horreeyey kacaankii Faransiiska iyo labadaba labada jacaylka adduunka. Ilaalinta hantida iyo raasumaalka ee canshuur-dhaafka ama dawladaha xakameynaya waxay ahayd nalka caadiga ah. Sidaa awgeed, mulkiiluhu wuxuu eegay Switzerland si uu u bixiyo adeegyadaas.
Sababta ay bangiyada Swiss u horumarisay arintaan waa mid lagu amaano bangiga badda sumcaddu waa tan. Ujeedadeedu waxay salka ku haysaa xaqiiqada ah in Switzerland ay leedahay sharciyo iyo xeerar aad u casriyeysan oo jira. Sharci dejinta ayaa dejisa qawaaniin gaar ah oo loogu talagalay baananka. Intaa waxaa dheer, waxay door bidaan xaqiijinta iyo sirta ah ee akoonnada deebaajiga dibedda, meeshii ay suuragal tahay. Kordhinta sumcadan ayaa ah in bangiyada Switzerland ay bixiyaan xirfad aan horay loo arag. Intaa waxaa dheer, waxay muujinayaan isku-kalsooni buuxda guud ahaan muranka jawiga bangiyada adduunka ugu xasilloon.
Taariikhda Swiss Banking
Xogta casriga ah ee Swiss Banking waxay raadin kartaa asalka asaasiga Sharciga Bangiga Swiss ee 1934. Dowladdoodu waxay sharciga u saartay qayb wayn inta badan sababtoo ah khatarta Nazi German Nazi iyo argagax siyaasadeed ee France. Labada shirkadood ayaa isku dayey inay ku cadaadiyaan bangiyada Swiss inay ku faafiyaan macluumaadka keydka macluumaadka "wanaagga gobolka".
Swiss waxay ka jawaabtay Sharciga Bankiga 1934. Sharcigan ayaa astaan ​​u ah qawaaniinta sirta xisaabta. Waxay sidoo kale bixisay sharci sharci ah. Ugu dambeyntii, waxaa la siiyaa ganaaxyada ciqaabta ee kuwa laga yareeyey sirta xisaabiyeyaasha kaydka. Tani waxay keentay xaalada hadda jirta ee aasaasiga ah (oo si fudud loo dhigo) halkan ayay ku haysaa shuruucda iyo qawaaniinta oo aan awoodin. Taasi waa, marka la eego xisaabinta sirta iyo qarsoodiga, iyo aqoonsiyada xisaabiyeyaasha ama xisaabta. Kama tegin taariikhda bangiga si khafiif ah. Waa inay jirtaa eedeyn culus oo ka hor intaan hay'ad dawladeed ah, gaar ahaan shisheeye, ay ka dhaadhicin karto gaashaanka sirta ah.
Xitaa eedeymaha ah cambaareynta canshuurtu waxay noqoneysaa mid ku filan in ay ku dhejiso shuruucda qarsoodiga ah ee bangiga Swisska. Dacwad-oogista ma ahan mid gardaro ah oo ku filan Swizerland, taas oo ah wax aan ka badneyn cambaareyn. Xaqiiqdii ma aha mid ku filan in la dhibaateeyo sharciyadiisa. Eedaynta waa in ay ahaato dabeecad khatar ah si ay baanka Switzerland u tixgeliyaan in ay ka fogaanayaan sharciyadiisa. Taasi waxay tiri, waxaanu si weyn ugu talinaynaa in canshuur u hoggaansamo sharcigaaga deganaanshaha iyo / ama dhalashada.
Qiyaaso badan ama qiyaaso, bangiyada Swiss ayaa leh saddex meelood meel ahaanshahooda oo dhan xisaabaadka dibadda. Iyadoo la tixgelinayo tirada maxaabiista Dakhliga dhulka, xudduudaha jiritaanka jiritaanka, tani waa muuqaal cajiib ah. Bangiyada Swiss ayaa haysta qiyaaso $ 2 trillion US oo lagu daray war-saxaafadeed. Sidaa daraadeed, Switzerland wali waa jaangooyo buuxda marka ay timaado bixinta jawi bangi oo xasilan.
Number of Bank Accounts Number
Koontada 'xisaabinta lambarka xisaabta' ee xisaabtu waa wax aan ka badnayn koontada lagu aqoonsaday tiro. Nambarka halkii magac magdhow ah lagu aqoonsanayo xisaabta. Baanka Swiss ayaa dejiya heerarka loogu talagalay sirta iyada oo xisaabiyahooda la tiriyay. Xitaa sidaa daraadeed, waa in uu jiro qof magac dhab ah oo lala xiriiriyo xisaab lambar ah. Hase yeeshee, bangigu si hagaagsan ayuu u haystaa Maaha wax aan la aqbali karin laakiin qaar ka mid ah madaxda sare ee bangiyada ee bangiga Swiss oo lagu qabto.
Xisaabyadani waxay si cad u bixiyaan qarsoodi ahaan qarsoodi ah. Waxay noqon karaan kuwo faa'iido leh, tusaale ahaan, shirkad ama caan ah caan ku ah qaraarka soo iibsiga weyn. Waxaa jiri kara dhaqdhaqaaqyo ay u baahan yihiin si ay u hantiyaan hantida iyada oo aan loo sheegin tartamayaasha, warbaahinta, ama hay'adaha kale ee colaadaha ah. Hal shay waa inuu ka muuqdaa akhrinta kor ku xusan. Xataa xisaab bangi oo lambarro ah, bangigu marnaba ma xaqiijin karo aqoonsi qarsoodi ah; gaar ahaan arrimaha dembiyada. Laakiin xisaabta lambarka leh ee Swiss waa sida ugu dhow ee koontada ay ku heli karto si ay u dhamaystirto fikradda.
Maanta Bangiga Swiss
Qaar ka mid ah hay'adaha waayeelka ah ayaa laga yaabaa inay ku engegaan oo ay u dhintaan iyadoo la isticmaalayo tiknoolajiyada Waxaa jiri kara farsamooyin ka hortagaya ujeedooyinkooda ama habka loo isticmaalo. Tani maahan arinkan kiiska bangiga Swiss. Bankiga Swiss wuxuu si degdeg ah ugu haboonaa jawaabta tiknoolijiyada casriga ah ee ay dejiso aduunka maanta. Lacagta elektaroonigga ah ee macaamilka lacagaha ah, si ay u isticmaasho tiknoolajiyada nabadgelyada amaanka, bangiyada Swiss ayaa horey ugu jirey dhaqanka bangiga casriga ah. Badanaa waa tagtay maalmaha kaararka adag ee saxeexa iyo kiis-kiis-kiis oo kulamo gacanqabasho ah. Waxay hadda si habsami leh ugu bedeleen saxiixyo elektaroonik ah iyo xarig ku salaysan "silig" internetka oo ku xiran hantida. Tax waafaqsan qayb ka mid ah ciyaarta maanta. Caalamiyaasha caalamiga ah ee la dagaalanka lacagta la dhaqay ayaa ku jira si loo ilaaliyo guurka wanaagsan iyo guurka xun.
Iyadoo laga bilaabo bilawga ah ee Sharciga Lacageed ee Canshuuraha Xisaabaadka ee Maraykanka (FATCA) ee Maraykanka, bangiyada doonaya in ay gudbiyaan lacagta Maraykanka waa inay bixiyaan daahfurnaanta cashuurta ee haysta xisaabaadka US. Shirwaynaha Maraykanka wuxuu sharciyadii ka qaaday Maarso 18, 2010 (26 USC § 6038D) oo wuxuu balaariyey bishii Diisembar 31, 2012 (26 USC §§ 1471-1474). Hadafku wuxuu ahaa in la dhaqan-galiyo ururinta canshuurta caalamiga ah. Daraasad ka socota Texas A & M ayaa lagu soo gabagabeeyay in falku uu abuuri doono wax ka yar $ $ Million oo ah dakhliga ku soo kordha xilliga 2.5 sanadka. Si kastaba ha ahaatee, warbixinta Forbes waxay muujineysaa in sariirta lagu dhaqan gelinayo FATCA inta lagu jiro sanadahaas ay ku kacayso $ 11.
Sababtoo ah qiimaha sare ee fulinta, bangiyada badan ee Swiss ayaa go'aansaday in aysan aqbalin macaamiisha Maraykanka ku salaysan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira bangiyo badan oo ka jira Switzerland oo aqbalaya macaamiisha Mareykanka. Sidaa daraadeed, si aad u ogaato qarashkan, bangiyada kuwa aqbalaya Maraykanka waxay haystaan ​​shuruudaha deebaajiga ugu hooseeya iyaga oo ku saabsan $ 250,000 ilaa $ 1 million US.
Maanta, bangiyada Swiss sidoo kale waxay u dhaqmaan sidii maalgelin. Waxay shaqaaleeyaan qaar ka mid ah maareeyayaasha lacagta ugu xirfadda leh. Sidaa darteed, waxaa jira fursado lagu iibsado kaydka, xayiraadaha, miisaaniyada wadajirka ah iyo biraha qaaliga ah onlineka. Haddii kale, waxaad heli kartaa la-taliye maaliyadeed oo tababaran oo kormeeraya faylalkaaga.
Waa in ay caddahay in bangiyada Swiss ay sii wadaan inay bixiyaan duni dhab ah, xalalka la gaari karo dhibaatooyinka badan ee wajahaya ganacsadaha iyo haweenka ku guuleysta maanta; gaar ahaan marka ay timaado ilaalinta hantidooda dareeraha ah. Haddii ay ka ilaalinayso nidaam aan sharci ahayn, xaalada siyaasadeed, xaalada dhaqaale, ama xitaa lammaane hore u ahaa, koontada bangiga Swiss waxay noqon kartaa xalka aad raadineysay.
<Illaa cutubka 11
Ku abaalmarin cutubka>